Madaxwaynaha Golaha Sare Arrimaha Islaamka Dalka Iyo Wafti Uu Hogaaminayo Oo Soo Gaadhay Xarunta Deegaanka - Cakaara News
Madaxwaynaha Golaha Sare Arrimaha Islaamka Dalka Iyo Wafti Uu Hogaaminayo Oo Soo Gaadhay Xarunta Deegaanka
Jigjiga(Cakaaranews) Sabti 29ka April 2017. Madaxwaynaha golaha sare arrimaha islaamka dalkeena itoobiya sheekh Maxamed aamiin iyo wafti uu hogaaminayo ayaa soo gaadhay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga.
Waxayna Madaxwaynaha golaha sare arrimaha islaamka dalkeena itoobiya Sheekh Maxamed Aamiin iyo waftiga uu hogaaminayo lakulmeen madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas’uuliyiinta golaha arrimaha islaamka ee DDSI, Iyadoo uu madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar uu si diiran usoo dhaweeyay waftigan. Wuxuuna madaxwaynuhu ka codsaday sheekha inuu shacabwaynaha dalka iyo kan deegaankaba halkaas ugu duceeyo.
Hadaba Madaxwaynaha golaha sare arrimaha islaamka dalkeena itoobiya sheekh Maxamed Aamiin oo kusoo beegmay xili ay deegaanku abaar ka jirto ayaa ugu horayn bogaadiyay heshiiskii dhawaan dhexmaray labada dawlad deegaan ee deegaanka somaalida iyo deegaanka oromada ka gaadheen dhanka soohdimaha islamarkaana ugu mahad celiyay xukuumada federalka iyo ta deegaanka sida hagar la aanta ah ee ay uga qaybqaateen xaalada abaarta. Isagoo sheekhu uga mahad celiyay madaxwaynaha DDSI sida loosoo dhaweeyay iyo waliba horumarka lixaadka leh ee uu ku talaabsaday deegaanku.
Ugu danbayna Madaxwaynaha golaha sare arrimaha islaamka ayaa guud ahaan shacabwaynaha dalka gaar ahaan deegaanka ugu duceeyay inuu allah ka dulqaado xanuunada iyo abaarta ka dhashay isbadalka cimilada islamarkaana uu siiyo roob khayrqaba iyo caafimaad deg deg ah.